UBrooks iyamthusa eyokufaniswa noPienaar, kodwa akayifaki ekhanda
July 12, 2021 Impempe.com
Kulezi zinyanga eziyisithupha ezidlule, u-Ethan Brooks usuke ekubeni ngumfanyana nje ozifanela nabo bonke abanye wayoba yiqhawe kwiBafana Bafana. NgoJanuwari, uBrook ubedlala eqenjini lenkulisa leTS Galaxy kwiMultichoice Diski Challenge.
Ukwenza kahle kwakhe kulo kwenze umqeqeshi u-OWen Da Gama wamlanda wamfaka eqenjini elikhulu. Akuphelanga sikhathi esitheni, wayidla indawo esiswini maphakathi nenkundla.
Kuphele isizini eseyinsika yeqembu. Lokhu kufakazelwe wukuthi uDa Gama abe nesibindi sokudedela uReneilwe Letsholonyane onaso sonke isipiliyoni nekhono elidingeka kule ndawo ngoba esethembe lo mfanyana omncane.
Ukwenza kahle kahle kuntshontshe neso lomqeqeshi weBafana osabambile, uHelman Mkhalele obe esembophela eqenjini elidlala kwiCosafa Cup eGqeberha. Usadlale imidlalo emibili kuphela kwiBafana kodwa usevele ufaniswa nensephe yaleli qembu, uSteven Piernaar.
Indlela uBrooks akangajahi ukuvelela ngayo, kodwa enze umsebenzi wakhe wokuhlakaza iminyakazo yokuhlasela yezitha bese eqala eyokuhlasela yeBafana. Yikho lokhu okwenze abantu baqala ukumqhathanisa noPiernaar, hhayi ngoba nakhu acishe afane naye nasebusweni kuphela.
“Kuyangijabulisa ukuthi ngithole ithuba lokudlala njalo kwiBafana,” usho kanje uBrooks ekhuluma neMpempe. “Kukhombisa ukuthi umqeqeshi uyangethemba.
“Njengomdlali lokho kuyinto enkulu kimi, kuyangikhuthaza futhi kungenza ngizethembe. Leli yithuba lami lokuvezela isizwe ukuthi ngingumdlali onjani.”
Useneminyaka engu-20 nje kuphela kanti ukufaniswa noPienaar owagcina engukaputeni kwiBafana futhi owayeyisilomo kwi-Everton e-England kufanele ukuba yinto emfaka umfutho, nengcindezi.
“Ingcindezi yokufaniswa nomuntu ofana noSteve Pienaar… Yho… Ungomunye wabadlali abaphambili abaphuma eNingizimu Afrika. Udlalile kuleli naphesheya wenza kahle futhi.
FUNDA NALA: ISAFA ithi akukho okushaya amanzi ngokungabonakali komqeqeshi weBafana
“Kimi, ukufaniswa naye kungifakela ingcindezi kodwa ngiyakwazi ukumelana nayo ngokubhekana nosuku ngalunye. Njengamanje ngibeke umqondo wami kulo msebenzi esibhekene nawo njengamanje (kwiBafana). Angifuni ukuzifakela ingcindezi.
“Sesiwine imidlalo emibili. Ngikholwa wukuthi ngaleli qembu esinalo lapha, singakwazi ukuhamba size sifike ekugcineni kwalo mqhudelwano. Abadlali abakule khempu bazimisele futhi bafuna ukuyiwina le ndebe.,” kuchaza yena.
IBafana isethubeni elihle lokuqeda iqhwakele eqoqweni layo kulo mqhudelwano. Isendaweni yesibili ngemuva kwe-eSwatini kodwa isalele emuva ngomdlalo. Izobhekana neLesotho ngoLwesibili, bese ivala ngeZambia ngoLwesithathu.
Previous Previous post: Iya eRome i-Euro… kusele izinyembezi kwelikaQueen
Next Next post: UCastro uthi ukubambisana kuphela okuyosiza iChiefs ibuye nendebe eMorocco